Siqhubeka noCharlotte Mannya Maxeke – The Ulwazi Programme
Emakhisini adlule sibhunge ngomlando kamama Charlotte kodwa nakhona besiwukhela phezulu njengombila, saphinda sathinta nendaba yosuku lwentsha nokuqashwa kwaya ithobe amathuba omsebenzi. Lana ke siqhubeka nomlando wakhe nokuthi kwenzeka kanjani ukuthi aze ayofunda phesheya kwezilwandle. Sikuvezile ukuthi umndeni kaCharlotte wathuthela eKimberly emuva kokuthola idayimane. Kuthe ke ekufikeni kwabakubo eKimberly wabe eseqala ukufundisa izifundo zolimu lwesintu kubantu ababemba idayimane, kanye naso iSilungu kubanatu abamnyama. Kuthe nonyaka ka1891 baqala umculo wamakwaya nosisi wakhe “African Jubilee Choir”. Ukucula kwakhe ke kwamqonsela amehlo abantu abaningi ngoba wayephiwe ukucula, omunye owaheheka ngumholi we”Choir” uMnumnzane M.V. Bam yena obebuye ahlele ukuthi amakwaya aseAfrika abuye aye phesheya kwezilwandle ezwenikazi lase “Europe”.
UCharlotte ube eseduma kakhulu ngomculo emva kokuba eziculele ngayedwa ehholo laseKimberley Town Hall, lokhu kwenza ukuthi aqokwe ukuthi abe ngabanye ababezohamba nekwaya beye phesheya. Leliqoqo ke labe selishiya elaseMzansi liya e”Europe” ngonyaka ka 1896, lapho ababecula khona emadolobheni ahlukene. Ngonyaka ka 1987 badlalela abantu e Queen Victoria’s 1897 Jubilee eLondon’s Royal Albert Hall lokhu kwenza ukuthi bahlonishwe kakhulu. Ukuhambela kwabo phesheya kwaba nezinselelo zakho nengoba bathe besezwenikazi laseMelika bashiywa kanjalo umuntu owayebaqaphile edolobheni lase Cleveland.
Kuthe sekwenzeke lokho uBishop Daniel A. Payne, webandla elibizwa ngokuthi African Methodist Church (AME) e-Ohio, owake wabamba ebamba enkonzweni eWestern Cape wahlela ukuthi laba asebeshiywe kanjalo behlale isikhashana eMelika. Wabe esebazamela isikole sokufunda, noma babefisa ukufunda eHoward University kodwa isikhala bagcina besithole eWilberforce University (AME Church University in Xenia) ngokuthola umfundazwe khona owabe esawamukela uCharlotte. Wabe esethweswa iziqu zakhe ngonyaka ka-1903.